असोज ५ गतेदेखि बस र हवाइ सेवा सञ्चालन हुँदै – Aarthik Dainik
breaking Posted on ३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:१६
असोज ५ गतेदेखि बस र हवाइ सेवा सञ्चालन हुँदै
सरकारले बन्द भएको करिब छ महिनापछि आउँदो असोज ५ गते सोमबारदेखि लामो दूरीको बस सेवा र आन्तरिक हवाइ उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ती दुवै सेवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
चैत ११ गते लकडाउन सुरु हुनुअगाडि नै हवाइ र अन्तर्जिल्ला यातायात बन्द गरेको थियो । तर, चैत ११ गतेबाट भने ती सेवा पूर्णतया बन्द भएका थिए । सरकारले जिल्लाभित्रको लागि बससेवा खोल्ने र सञ्चालन गरे पनि अन्तर्जिल्ला बससेवा भने सञ्चालन गरेको थिएन ।
काठमाडौंमा बाहिरबाट आउनेले कोरोना ल्याउँछन् भनेर यसअघि अन्तर्जिल्ला बससेवा सञ्चालन नगरिए पनि अहिले बाहिरी जिल्लामा भन्दा काठमाडौंमा बढी कोरोना संक्रमित देखिएपछि सरकारले बससेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिँदै सरकारको प्रवक्ता बनाएको छ । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतमले यसअघि पटक–पटक प्रतिनिधिसभामा आउने प्रयास गरेका थिए । उनले काठमाडौंका रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर सो क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका थिए । तर, जनविरोध बढेपछि गौतम पछि हटेका थिए ।
त्यसपछि रवीन्द्र अधिकारीको निधनबाट रिक्त कास्कीमा चुनाव लड्ने योजना बनाए पनि पहिल्यै विरोध भएपछि उनले त्यहाँ पनि उठ्ने कोशिस गरेनन् । पछि डोल्पाका निर्वाचन सांसदलाई राजीनामा गराएर चुनाव लड्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल भएनन् ।
प्रतिनिधिसभामा चुनाव उठ्ने प्रयास असफल भएपछि गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरे । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उनी राष्ट्रियसभामै नजाने निचोडमा पुगेका थिए । त्यसपछि आर्थिक अपराधीहरुको उक्साहटमा गौतमले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएको पदमा मनोनीत हुने इच्छा व्यक्त गरे ।
गौतमले पहिला नै राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए भने स्थानीय र प्रदेश तहबाट निर्वाचित हुने पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय हुने थियो । तर, गौतमले खतिवडालाई नै रोक्ने गरी उनकै पद खोजेर बसेपछि गौतममाथि करछली गर्ने आर्थिक अपराधीहरुको लगानी रहेको आशंका गरिएको हो ।
शैलुङ र होनिकोलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई पत्र
पहिरो र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व
७ पुष २०७६, सोमबार १६:४१
९६ जना चिनियाँ ह्याकर राजधानीबाट पक्राउ !
२६ असार २०७७, शुक्रबार ०८:१४
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:५६
अन्तरबैंक कारोबार घट्यो
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ११:२१
४१ हजार एक सय ४० जना उच्च निगरानीमा
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार ११:२४
बीमा कम्पनीहरुको नाफामा संकुचन
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १०:००
संक्रमित ह्वात्तै बढेपछि ‘कोरोना बीमा पोलिसी’ बिक्रीबाट कम्पनीहरु पछि हटे